रूकुमबाट रू. ७७ लाखको दुग्धपदार्थ निकासी
रूकुम (अस) । रूकुमबाट १ वर्षको अवधिमा रू. ७७ लाखको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ निकासी भएको छ । मुसीकोट नगरपालिका–४, स्थित नागरिक दुग्ध सहकारी संस्थाले गत पुसदेखि यता बाँकेको कोहलपुरस्थित दुग्ध विकास संस्थानको दुग्ध आयोजनामा उक्त मूल्यको बराबरको दुग्धजन्य वस्तु पठाएको हो । सहकारीले किसान...
स्थानीय तहमा तथ्यांक बुझाउँदैनन् निजी क्लिनिक
रूपन्देही । रूपन्देहीका निजी क्लिनिकले बिरामीको तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा नबुझाउने गरेको पाइएको छ । कतिपय निजी क्लिनिकले बिरामीको तथ्यांक समेत राख्दैनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा र जनस्वास्थ्य कार्यालयस“ग निजी क्लिनिकमा उपचार गराउने बिरामीको य...
प्रदेश ५ प्रदेशसभाबाट ४८ कानून पारित
रूपन्देही (अस) । प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले हालसम्म ४८ ओटा कानून पारित गरेको छ । प्रदेशसभाले पाँचौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा दर्ता भएका ५१ ओटा विधेयकमध्ये अहिलेसम्म ४८ ओटा पारित गरेको प्रदेशसभाका सचिव दुलभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए । अहिलेसम्म नियमावली भने १० ओटा मात्रै बनेको उनले बताए । यसले गर्दा कानू...
समयमै मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै राप्ती पुल
दाङ । दाङको लमही–कोइलावास जोड्ने हुलाकी राजमार्ग खण्डको राप्ती नदी पुल जीर्ण बन्दै गएको छ । निर्माण भएको ८ वर्षसम्म एकपटक पनि मर्मत नहुँदा पुल दिनप्रतिदिन पुल जोखिमपूर्ण बनेको छ । पुलको कालोपत्र उप्किएर ठूला–ठूला खाल्डा परेका छन् भने दाँया–बाँयाका रेलिङमा खिया लाग्दै गएको छ । ...
१ करोडको लगानीमा पूर्वपर्यटन मन्त्रीले गरे व्यवसायिक ‘ड्रागन फ्रुट’ खेती
माघ १८, दाङ । कुनैबेला राजनीतिक जीवनमा सक्रिय देखिएका पूर्वपर्यटन तथा स्वास्थ्य मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट आजभोलि आफैले लगाएको ‘ड्रागन फ्रुट’ खेतीमा व्यस्त छन् । उनले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ स्थित विजौरीमा ६६ कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर ड्रागनको व्यवसायिक खेती गरेका छन् ।...
‘नसर्ने रोग ठूलो स्वास्थ्य समस्या’
रूपन्देही । नेपालमा नसर्ने रोग ठूलो स्वास्थ्य समस्याका रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । एक÷डेढ दशक अघिसम्म सर्ने रोग समस्या रहेकोमा पछिल्लो समय नसर्ने रोग जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेको हो । नसर्ने रोगले स्वरूप बदलेको र अहिलेको समयमा मुख्य स्वास्थ्य चुनौती बन्दै गएको चिकित्सक बताउँ...
प्यूठानको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न रू. १४ करोड
प्यूठान । प्यूठानको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रू. १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका ९ ओटैै स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न उक्त बजेट विनियोजन भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालय प्यूठानले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष ग्रामीण क्षेत्...
तिलोत्तमामा ‘शून्य खुला पोलिथिन’ अभियान
रूपन्देही । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले शून्य खुला पोलिथिन अभियान सञ्चालन गरेको छ । सिम नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा चलाइएको अभियान अन्तर्गत नगरका विभिन्न टोल र विद्यालय शून्य खुला पोलिथिन क्षेत्र घोषणा भइरहेका छन् । यसैक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ९ लाई मंगलवार शून्य खुला पो...
ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्दै बाँके
नेपालगञ्ज । पछिल्लो समय लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएपछि बाँकेमा उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन् । ऊर्जा संकट समाधान, सडक यातायातलगायत अन्य पूर्वाधारको विकास भएसँगै जिल्लामा ठूला औद्योगिक समूहले लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको व्यापारी केन्द्रसमेत रह...
गुणस्तरहीन सामानको विक्री गरेको भन्दै थापा फुड्स प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रिजको कारोबार बन्द
माघ १५, रुपन्देही । बजारमा गुणस्तरहीन सामानको विक्री बढेको उपभोक्ताको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) ले बजार अनुगमन शुरु गरेको छ । जिप्रका रुपन्देहीको नेतृत्वमा वाणिज्य कार्यालय, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, बुटवल उपमहानगरपालिका, नेपाल प्रहरी र पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसहितको ट...